Wiil Dhalinyaro ah oo Xalay lagu dilay Muqdisho | Dayniile.com
Home Warkii Wiil Dhalinyaro ah oo Xalay lagu dilay Muqdisho
Kooxo Burcad hubeysnaa ayaa xalay Xaafada Jamhuuriyah ee degmada Kaaraan ee Gobolka Banaadir waxaa ay ku dileen Wiil Dhalinyaro ahaa kana mid ahaa dadka kunool Xaafadaas.
Mid kamid ah dadka Xaafadda Jamhuuriyah ayaa dayniile u sheegay in ragga Burcadda ah ay Wiilka ku amreen in uu taleefoonka kusoo wareejiyo, balse markii uu isku dayay in uu ka baxsado ay dhowr xabadood madaxa kaga dhufteen, isla markaana dhaawac culus oo soo gaaray uu ugu geeriyooday Isbitaalka Digfeer ee Magaalada Muqdisho.
Previous articleSiyaasaddu Hay’ad samafal ma aha! – 1
Next articleMadaxweynaha Degaanka Soomaalida Oo Kulan Gaar Ah La Qaatay Saraakiisha Amniga
Xeebta Magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa la soo sheegayaa in saaka laga helay meydadka laba Dhalinyaro Soomaali ah. Wararka ayaa waxay sheegayaan in dadkaasi...
MAXAA KA CUSUB MAGAALADA BOOSAASO?
Doorashada kuraastii ugu horreeysay ee Golaha Shacabka oo Maanta dhaceysa